IFIRP Mahajanga: Mitokona ny mpianatra
vendredi, 09 novembre 2018 09:04
Niato nanomboka omaly maraina alakamisy 08 novambra teo ny fampianarana ary tsy handeha hanao stage amin'ireo hopitaly sy CSB ny mpianatry ny IFIRP Mahajanga raha tsy vahana faran'izay haingana ny olan'izy ireo, araka ny fanambarana nataon'izy ireo sy ny sorabaventy mihantona amin'ny rindrin'ny sekoly.
Tsy mitovy amin'ny "présalaire" raisin'ny mpianatry ny IFIRP any amin'ny faritra hafa no raisin'izy ireo, fa 7 volana monja kanefa 11 volana no mianatra raha ny fanazavana. Hatramin'ny taon-dasa io fanomezana "présalaire" tsy feno io ka tsy eken'izy ireo intsony.
2 taona izay no nisian'ny sampana manofana ho Anesthésiste tao amin'ity sekoly ambony ity, saingy milaza ny ministera mpiahy fa tsy mahalala ny fisiany ka tsy mandray "présalaire" ireto farany.
Ireo no angatahan'ireto mpianatra maherin'ny 200 miofana ho mpampivelona sy mpitsabo mpanampy ireto, fidinan'ny ministera hizaha ifotony ny olana, fa tsy hihaino feon-dakolosy tokana avy amin'ny mpitantana ny sekoly.
Tsy hiverina amin'ny laoniny ary hihamafy ny hetsika raha toa ka tsy misy mpijery akaiky ireto mpianatra ireto araka ny nambaran'izy ireo hatrany.